पछिल्ला दिनहरुमा निरन्तरजसो बढेको सेयर बजारमा बुधबार करेक्सन आएको छ ।
ट्रेडरहरुमा नाफा बुक गर्ने सोच देखिंदा बजारमा सामान्य करेक्सन आएको हो । नेप्से करेक्सन भइरहँदा खरिदबिक्री रकममा भने उत्साहप्रद हिसाबले वृद्धि भएको छ । यस दिन नेप्से सूचक ३०.५१ अंकले घटेर २८०३.६३ विन्दुमा अडिएको छ । नेप्से इन्ट्रा डे मा २८७४ विन्दुसम्म पुगेको थियो । यसअघिको २८७८ विन्दु परीक्षण गर्नेक्रममा सूचकमा सामान्य गिरावट आएको हो ।
यस दिन ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ । यो बजारको पछिल्लो वृद्धि यात्रा सुरु भएयताकै सबैभन्दा धेरै कारोबार रकम हो । ४ कम्पनीको भाउमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । बजार आम लगानीकर्ताका लागि मनोवैज्ञानिक हिसाबले समेत निकै महत्वपूर्ण मानिएको २८ सय विन्दुभन्दा माथि नै रोकिएको छ ।
केही करेक्सनहरुका बाबजुत औसतरुपमा र दीर्घकालीन हिसाबले बजारको गति सकारात्मक र बुल ट्रेन्डमै रहने विश्लेषकहरुले बताएका छन् । प्राविधिक विश्लेषकहरुको यही भनाई रहेको छ ।
छोटो समयमै साढे ५ सय हाराहारीमा बढेको बजारमा करेक्सन आउनुलाई सामान्य मानिएको छ । करेक्सनपछि बजार थप सबल र स्वस्थ हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् । बजार सधैं एउटै गतिमा मात्र हिँड्दैन । तलमाथि हुँदै अघि बढ्ने यसको विशेषता हुन्छ । यो विषयलाई आम लगानीकर्ताले पनि मनन् गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, औसतमा बजारको गति सकारात्मक नै रहनेछ । बुल यात्रा जारी रहेको विश्लेषणहरु भइरहेका छन् ।
हाम्रो सेयर बजारमा नीतिगत प्रभाव सबैभन्दा बढी पर्ने गरेको छ । पछिल्ला दिनहरुमा केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयले तरलता सहज बनाउन केही नीतिगत कदमहरु चालेकाले त्यसको औसत अवस्था र विशेष गरेर दीर्घकालमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव सेयर बजारमा देखिने विश्लेषणहरु भइरहेका छन् ।
अहिले चालिएका नीतिगत सुधारका कामहरुले पनि बजारलाई सकारात्मक प्रभाव नै पर्नेछ । स्थानीय तहमा जाने बजेटमध्ये ८०% लाई निक्षेपमा गणना गर्न पाइने, आयातमा कडाई, सुनचाँदी आयातमा पनि नियन्त्रण अनि डलर लैजान पाउने सीमामा नियन्त्रण लगायतले आन्तरिक बजारमा तरलता सहज हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी, बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरुलाई नगद लाभांश दिन रोक्ने र बोनसमा जोड दिने निर्णय गरेको छ ।
हाम्रो बजारले बोनस सेयर रुचाउने भएकाले पनि यसको सकारात्मक प्रभाव बिमा कम्पनीहरुको बजार मूल्यमा परिरहेको छ । यस्तै, माघ लाग्नै लाग्दा सरकारी खर्च बढ्ने प्रक्षेपणहरु भइरहेका छन् । कोरोना संक्रमण फैलिन थालेकाले लगानीका अरु क्षेत्रहरु संकुचित हुन थालेका छन् । यस्तै, स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति पनि नजिक आइसकेको छ । चुनावका कारण तरलता थप सहज हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
बजार घट्दा होस् वा बढ्दा, लगानीकर्ताले कम्पनीहरुले सार्वजनिक गरेका वित्तीय विवरणहरु, सम्बद्ध कम्पनीको व्यवस्थापन र सञ्चालकहरुका बारेमा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । यस्तै, सम्बद्ध क्षेत्रमा व्यवसायको अवसर र प्रतिस्पर्धा, कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी कति छ ? नियमनको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने विषयतर्फ पनि अध्ययन गर्न अनुभवीहरुले सुझाव दिने गरेका छन् । लगानीकर्ताले कुन उद्देश्यले सेयर किन्ने हो ? आफू इन्भेष्टर र कि ट्रेडर भन्नेसमेत ध्यान दिंदै सोही अनुसार रणनीतिहरु तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सबल वित्तीय सूचक भएका कम्पनीहरुमा सकेसम्म दीर्घकालीन हिसाबले लगानी गर्न सके लाभ लिन सकिने अनुभवीहरु बताउँछन् । यसैगरी, लगानी गरिने क्षेत्र तथा समूहहरुको तुलनात्मक अध्ययन, इन्डस्ट्री ग्रोथ रेट लगायतका सूचकहरुमा पनि लगानीकर्ताले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । ब्लुचीप कम्पनी छान्ने कि ग्रोथ ओरियन्टेड कम्पनी छनोट गर्ने भन्नेमा पनि योजना बनाउन विश्लेषकहरुले सुझाव दिने गरेका छन् ।